Imidlalo yokuGubula i-Ice
Ukudlala imidlalo kwiqhankqalaza kuya kwenza ukuba amava e-ice skating ahlekise. Iimidlalo ezidweliswe kweli nqaku zizodlala kumaqela amakhulu okanye amancinci. Eminye yemidlalo iyimidlalo yasekuqaleni ye-ice skating imidlalo Eninzi yeemidlalo ezidweliswe kweli nqaku zenzelwe abantwana, kodwa abadala banokudlala.
"I-Bumpers Cars" ngumdlalo onokwenza umdlalo we-ice skating uhlelwe ngabantu abancinci, abaqalile i-ice skaters, ngokubhekiselele kwi-ice skater kunye nomqeqeshi uJoann Schneider Farris.
Ngaphambi kokudlala i-Bumper Cars, bonke abathathi-nxaxheba kufuneka bakwazi ukudibanisa nokuqhubela phambili kwiqhwa. Ngokudibanisa, i-skater ihamba ngeenyawo zihamba ngeenyawo zimbini kwaye ihlasele ngokubanzi kunokwenzeka.
Ukudlala, yenza i skate skate ngokukhawuleza njengoko banako kwindawo encinci. Emva koko, xelela abantwana ukuba "bahlale emotweni yabo." (Ngaloo nto bafanele baxhamle kwisimo sokudibanisa.)
Iimpawu zijika isondo kunye nezandla nezandla. Tshela abantwana ukuba baqale ukuqhuba. Yenza i-beeping kunye nodumo lwezandi.
Ikhava ngakwesobunxele okanye ngakwesokudla. Njengoko usondela kwenye intloko yekhredithi, ukujika ngokukhawuleza kwindlela. Zenza uziqhekeze uze ukhawuleze njengoko usondela kufuphi ne-skater. Musa ukugodla nabani na!
Shoot Game Game
Umzobo we-skater udubula idada. UJO ANN Schneider Farris
Ukudubula-idada kuthathwa njengento emnandi kakhulu yokukhwela i-ice skating. I-skater squats yonke indlela eya kwiqhwa kwaye igxotha ngelinye ilanga ngelixa elinye inyawo likhishwe ngaphambili.
Ukwenza udonga-idada, kuqala uqhube phambili ngeenyawo ezimbini. Emva koko, ukuguqa ngamadolo kwaye ugobe ukuze uhlale uhleli kwiqhwa. Hambisa ngokukhawuleza njengoko unako. Emva koko, ngelixa ujikeleza ngeenyawo ezimbini, ukukhaba enye inyawo kwaye uqhubeke ujikeleza kwenye inyawo.
Ngoku, fumana abahlobo kunye kunye nokudlala umdlalo we-duck. Nantsi indlela yokudlala:
Fumana i-skaters ezimbalwa ukukhawuleza ngokukhawuleza ngokukhawuleza malunga ne-ice rink. Emva koko, umntu makamemele, "Shoot-the-Duck!" Emva koko, wonk 'ubani ulala phantsi kwaye kufuneka enze i-shot-duck ngenyawo olunye. I-skater ebambe isikhundla se-shot-the-duck kwinqanaba elinye ixesha elide kunene.
Ukuwa kuvuya xa udlala umdlalo we-duck-duck. Khumbula, akukho nkohliso!
Ngaba i-skaters ibamba izandla kwisangqa.
Khetha umntwana omnye ukuba ahambe phakathi. Ingaba umntwana ubamba izandla zakhe eziza kuba "ngumsi."
Fundisa abantwana le ngoma: '"Igama" "Igama" nqumla ikhekhe! Yenza iziqwenga zihle kwaye ziqonde! '
Tshela umntwana ukuba athole indawo "yokunquma" aze akhuthaze umntwana ukuba "anqume" phakathi kwabantwana ababini kwisangqa abamba izandla.
Ngaba "umqambi" unamathele "ummese" wakhe aze abe nabantwana ababini abaye banqumla umzila kwiindlela ezahlukeneyo kwisangqa. Othe wathintela ummese kuqala. Phinda kwakhona.
Qaphela: Umdlalo weCau-the-Cake wadlala ngexesha lemizuzu emihlanu edlulileyo yeeklasi ezininzi zokukhwela i-ice kwi-Ice Capades Chalets kuma-1980.
I-skaters imile kwisangqa kwiqhwa. Omnye umgca wecala uya ephakathi kwaye ahlawule . I-skaters ithi le ngoma elandelayo njengoko i-skater iphengula:
"Hamba, (igama lomgca), Hlola. Misa kumntu nangaloo mntu!"
Xa i-skater's spin iyeka, nabani na ojongene nayo uhamba phakathi kwaye ahlawule. Umdlalo ungadlala kuze kube yilapho wonk 'ubani enelungelo lokwenza.
Ngaba abantwana bayamemeza, "Ukuwa kukuzonwabisa!"
Ngaba abantwana bakhala, "Sonke siwa phantsi!"
Emva koko wehla ngenjongo.
Vumela abantwana baqhube kwiqhwa njenge "doggie" baze bavuke.
"Ingqungquthela ejikeleze i-snowpile" inguqulelo ye-ice skating ye "Ring Around the Rosy." I-skaters kufuneka ibambe izandla kwisangqa kwaye ishukume xa kunokwenzeka xa uthetha isiqulatho esilandelayo:
"Vulela i-snowpile, ipokethi egcwele iinqaba zekhephu ... iinqabana zeqhwa, iinqaba zeqhwa ... sonke siwa phantsi!"
Wonke umntu ngoku uwa phantsi. Lo mdlalo udala ukuhleka!
Ukukhanya okuBomvu okuKhanya okuBomvu
UkuKhanya okuBomvu okuBomvu kuyindlela enhle yokunceda umgca omtsha we-ice skaters ukuyeka . Ukukhanya okuluhlaza kuthetha "Hamba," kwaye ukukhanya okuBomvu kuthetha "Yeka." Umntu ophetheyo unokugcizelela ukuba i-skaters yenza i-stopplow stop stop. I-skaters kufuneka ikhuthazwe ukuba "ikhuphe" kwaye ingagudluli kwiqhwa. Ukuwa phantsi endaweni yokumisa kufuneka kuphazamiseke. I-skater efikelela kumgca wokugqibela okanye umzila wokuqala we-rail!
Ingoma yesiHokey Pokey kunye nomdlalo kuyamnandi kwiqhwa. Esikhundleni sokubeka "inyawo lakho lokunene," i-skater ingafaka "i-skate yayo efanelekileyo!" Lowo okhokela lo mdlalo kufuneka alungiselele ukucula iHokey Pokey kunye ne-skaters. Ukucela uncedo ngokucula kufanele kukhuthazwe. Nantoni na, i-skater "ifakwe" kufuneka ifakwe kwiingoma ezingezantsi:
Beka i-skate yakho yesokudla,
Beka ilungelo lakho lokuphuma,
Faka isikhokelo sakho sokunene
Yaye uyayigubungela yonke into
Unokwenza iHokey Pokey uze uziphendukele
Yiyo yonke into!
Lo mdlalo uquka ukufunda indlela yokwenza umncinci onqumla phezu kweqhwa kunye nokuguquka (ukujikeleza) ngeenxa zombini. Ukubeka "yakho yonke into" kuthetha ukuba i-skaters iyakwazi ukukhwela phambili kwaye ibuyele emuva ngokuqhubela phambili i- swizzle "ngaphakathi" kwaye ibuye ibuyele emuva. "
Xa udlala lo mdlalo, i-skaters kufuneka imele isangqa kwiqhwa. (I-skaters ayifanele ihlale phantsi njengeDuck, iDuck, Goose game ukusuka kwinqanaba elimanzi kwaye libandayo.)
Omnye umdlalo "Nguwe."
Umqhubi othi "Nguye" ujikeleza isangqa aze athwebe wonke umntu entloko, ebiza "Duck" njengoko aphepha.
Emva koko, i-skater ekhethiweyo ithathwa. Esikhundleni sokuthi, "Duck," xa ephethe i-skater, uyamemeza esithi "Goose!"
Umqhubi obizwa ngokuthi "Goose" emva koko ugijime umkhangeli owenza intambo ejikeleze isangqa. Ukuba "It" iya kubuyela kwindawo apho ephethe khona "Goose," ukhuselekile. Ngoku umntu oye "Goose" uba "Yi" kunye nokuphinda umdlalo.
Ukuba nabani na ongaphumeleli ekubuyiseni kwindawo evulekile kwisangqa kwaye ebanjwe ngu "Goose" uya kwinqanaba lesangqa kwaye akakwazi ukuphuma ngaphandle kokuba umntu angabuyi kubuya ngexesha.
Uthini Umehluko Phakathi Kokudansa kwe-Ice kunye nokukhwela kwePair?
Iiplora zeZakhono zePhulo - iiBiliyadi ezonwabileyo
Khangela Oko okushiwo yi-MILF isiNgesi
Indlela Yokugcina I-Kayak Yakho Edibeneyo
Ngonwabanga Ngendlela Yakhe: Isikhokelo soFundo lweAna Karenina
Indlela yokwenza iSlime (Classic recipe)
Indlela Oobleck isebenza ngayo
Iphrofayili yeSerial Killer Debra Brown